Iphepha elilahlayo nelungelo lokushicilela | CELISA
Wamkelekile kwiwebhusayithi yethu. Ukuba uyaqhubeka nokukhangela kunye nokusebenzisa le webhusayithi uyavuma ukuthobela kwaye ubophelelekile kwisibhengezo esilandelayo, kunye nemigaqo yethu kunye neemeko zokusebenza.
Olu lwazi luqulathwe kule webhusayithi lwazi ngokubanzi kuphela kwaye lubonelelwa ngu eyemesschools.com. Ngelixa sizama ukugcina ulwazi lusehla kwaye luchanekile, asenzi mboniso okanye ziqinisekiso zalo naluphi na uhlobo, sibonisa okanye sibonisa, malunga nokugqibelela, ukuchaneka, ukuthembeka, ukulunga okanye ukubakho ngokubhekisele kwiwebhusayithi okanye ulwazi, iimveliso, iinkonzo , okanye imizobo ehambelana nayo kwiWebhusayithi kuyo nayiphi na injongo. Nakuphi na ukuthembela okubeka kulolu lwazi kungokusemngciphekweni wakho. Kuya kufuneka wenze eyakho imibuzo ukujonga ukuba ngaba ulwazi okanye iimveliso zilungele ukusetyenziswa kwakho.
Indawo yewebhusayithi inezixhobo zokuguqulela uLwimi. Akukho luxanduva oluthathwayo ngokuchanekileyo lwayo nayiphi na inguqulelo.
Xa kungekho siganeko siza kuba nabutyala ngayo nayiphi na ilahleko okanye umonakalo kubandakanywa ngokungaphandle komlinganiselo, ilahleko ngqo okanye esisiphumo okanye umonakalo, okanye nayiphi na ilahleko okanye umonakalo nokuba evela ukulahleka kwengcaciso okanye ingeniso evela ngaphandle, okanye ngokunxulumene, ukusetyenziswa kwale website .
Ngale webhusayithi unokukwazi ukunxibelelana nezinye iiwebhusayithi ezingekho phantsi kolawulo lwe eyemesschools.com. Asinakulawula ubume, umxholo kunye nokufumaneka kwezo webhusayithi. Ukufakwa kwalo naliphi na amakhonkco akuthethi ukuba kunconyelwe okanye kuxhaswe izimvo ezivezwe ngaphakathi kwabo.
Yonke imizamo yenziwa ukugcina iwebhusayithi iphakama kwaye isebenza kakuhle. Nangona kunjalo, eyemesschools.com ayithwali xanduva lazo, kwaye ayizukubekwa tyala, iwebhusayithi ayifumaneki okwethutyana ngenxa yemicimbi yobugcisa engaphaya kolawulo lwethu.
Isaziso seLungelo lokushicilela
Le webhusayithi kunye neziqulatho zayo zingamalungelo okushicilela I-CAUSE (Umdibaniso ngokuchaseneyo neMfundo yezeSondo engakhuselekanga) -© 2018. Onke amalungelo agciniwe.
Nakuphi na ukwabiwa ngokutsha okanye ukuveliswa kwakhona kwenxalenye okanye konke okuqukethwe kulo naluphi na uhlobo kuthintelwe ngaphandle koku kulandelayo. Unokuprinta okanye ukhuphele imixholo kwi-hard disk yendawo yakho ukuze uyisebenzisele wena kwaye ungathengisi urhwebo kuphela. Unokuzikhuphelisa ezinye izicatshulwa ezizezinye kuphela umntu ozisebenzisela yena, kodwa ukuba uyamkelwa yiwebhusayithi njengomthombo wezinto.
Awungekhe, ngaphandle kwemvume ebhaliweyo ebhaliweyo, usasaze okanye ukuxhaphaza ukuthengisa kumxholo. Awunakho ukuyihambisa okanye ukuyigcina kwenye iwebhusayithi okanye enye indlela yenkqubo yokubuyiswa kwe-elektroniki.
[/ vc_column_ Umxholo] [/ vc_column]
Indawo yokuguqulela kaGoogle kwiSayithi ivelisa umatshini wokuguqula amanani asuselwe kwinkqubo yethu. Ulwazi, iarhente zethu, kunye nabanikezeli beelayisensi zethu, abenzi zizo naziphi na izinto malunga nokuchaneka, ukugqibelela, okanye ukufaneleka kwazo naziphi na iinjongo zenguqulelo. Ulwazi alunakuba luxanduva nakuphi na ukuphulukana, isenzo, amabango, ukuqhubeka, iimfuno, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko, iindleko . Ukusebenzisa kwakho eli nqaku kuxhomekeke kule Migaqo.